पोष्टमार्टममा पोख्त | Hamro Doctor News
(पटकपटकको अनुरोधपछि मात्रै अन्तर्वाता दिन समय छुट्याएका प्रा डा. हरिहर वस्तीको कार्यथलो त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज पुग्दा उनी व्यस्त थिए । उनलाई हामीले अरु पौने एक घण्टा कुर्नु प¥यो । शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा एक आफन्तलाई उपचारको चाँजोपाँजो मिलाएर उनी पसिना चुहाउँदै कार्यालयमा छिरे । औपचारिक कुरा सुरु गर्नु पूर्व नै प्राध्यापक डा. वस्तीले सोधे ‘ल भन्नुहोस के कुरा गर्ने ?’ तपाइले के कति संघर्ष गर्नुभयो भन्नेबारे कुरा गर्न आएको भन्ने हाम्रो जवाफ थियो । हाँस्दै उनले भने, ‘अहिले म जहाँ छु या जस्तो देखिन्छु त्यसको पछाडी ठूलै तपस्या लुकेको छ ?’ तर उनलाई हेर्दा त्यस्तो लाग्थेन । सोच्यौं, मृत शरीरमा छुरा चलाएर सुरु हुने र त्यसै गरी वित्ने दैनिकीबीच उनी यति धेरै फुर्तिलो र हसिँलो कसरी हुन सकेका होलान ? हाम्रो सोचाईलाई उनले नै भङ्ग गर्दै भने लौ अब कुरा सुरु गरौं । )
आजभन्दा बीस पच्चिस वर्षअघिको कुरा हो उनलाई फरेन्सिक सेवाको सुधार गर्ने भूत नै चढ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ढोका ढकढकाए, ‘यो क्षेत्र निकै नाजुक छ यसको म सुधार गर्न चाहन्छु ।’ उनको कुरामा न मन्त्रालय सकारात्मक बन्यो । न आफन्तले उनलाई यो काममा अघि बढ्न साथ थिए । ‘तँ पालग भइस् की के हो ? दिनहुँ मरेका मान्छे चिरेर पनि कोही बस्छन् । तँ डाक्टर होस् अरु राम्रो काम गर । किन यही नचाहिने काममा बढि ध्यान दिन्छस् ?’ तर जस्ले जे भनेपनि डा. हरिहर बस्तीमा सवार फरेन्सिक सेवा सुधार गर्ने भूत हटेन ।
‘म पागल नै बनेको थिएँ त्यतिबेला । बीर अस्पतालमा काम गर्दा गर्दै फरेन्सिक मेडिकल अध्ययनका लागि श्रीलंका गएँ र त्यहाबाट फर्किएर पनि बीरमा नै काम गर्न थालेँ ।’ उनले भने, ‘त्यस ताका त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नाम मात्रैको फरेन्सिक विभाग थियो । बीर अस्पतालको त्यो भन्दा पनि नाजुक ।’ श्रीलंकाको अध्ययन पछि उनलाई वीरले दिइरहेको फरेन्सिक सेवा पूर्वाधार र ठाउँको स्थिती हेर्दा झनै नाजुक लाग्यो र त्यो सेवा त्यहाँबाट सार्नुपर्ने निर्णयमा पुगे । फरेन्सिक सेवाका लागि छुट्टै निकायको माग गर्दै उनी दिनहुँ स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउन थाले । यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको, सिनियर चिकित्सकको गल्तीले गर्दा जुनियरले नजानी नजानी काम गरिरहेको, निर्दोष मानिस जेल जानु परेको, अपराधी खुलेआम हिडेको जस्ता गुनासो बोकेर उनी धेरै पटक मन्त्रालय पुगे ।
होचो, अँध्यारो र कालो कोठामा मृत शरीर चिर्नुपर्ने, नत शबको संरक्षण गर्ने ठाउँकै उपलब्धता । पोष्टमार्टमका लागि शब चिर्ने डाक्टरहरुलाई नुहाउने ठाउँ पनि थिएन । डा बस्तीलाई बिरक्त लाग्यो । श्रीलंकामा बटुलेको सीप र ज्ञान प्रयोगहीन जस्तै बन्यो । शबहरुको अध्ययन, पोष्टमार्टम र बेवारिसे शबहरुलाई राख्ने स्थानको व्यवस्था गरौं र फरेन्सिक सेवाको सुधार गरौं भन्दा सरकारले सुनेन । ‘मुलुक राजनीतिक द्धन्द्धको चरम अवस्थामा भएकाले पनि सरकारको प्राथमिकतामा यो परेन ।’ डा. बस्तीले भने ।
अन्तमा उनले मन्त्रालयमा गएर ‘यो क्षेत्रको सुधार गर्न नदिने हो भने म राजिनामा दिन्छु,’ भनेर घुर्की लगाए । बस्तीको धम्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालय गंभीर बन्यो । बीर अस्पतालमा रहेको पोष्टमार्टम सेवा बन्द गर्दै शिक्षण अस्पतालबाट मात्रै दिनेगरी सुधार गर्न सहमत भयो । ‘त्यो मेरो उपलब्धिको क्षण थियो ।’ उनले भने, ‘मैले आफुसँगै अध्ययन गरेका डा. प्रमोद कुमार श्रेष्ठ र डा.तुलसी कँडेलको सहयोग लिएँ । उनीहरु शिक्षण अस्पतालमा साताको दुई घण्टा पढाएर बसेका थिए ।’
उनीहरुसँग मिलेर शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक सेवा व्यापक बनाउने डा. वस्ती अभियानले मूर्त रुप लिदैं गयो । तत्कालीन आइओएमका क्याम्पस प्रमुख डा. रमेशकान्त अधिकारीले सहयोग रहेपछि डा. बस्ती लगभग सफल भए पनि ।
श्रीमतीको स्पर्शले कष्ट दूर
मृत शरीर देखेपछि प्रायः सबैको मन त्रसित हुन्छ । अचानक आँखाहरुमा डर पैदा हुन्छ । अझ छुरा चलाएर त्यो शरीरको भित्री पाटो हेर्ने सहास थोरैले जुटाउन सक्लान् । त्यस्तो अदम्य र अनौठो सहासका पर्यायवाची बनेका डा. हरिहर वस्ती । नेपालको कानुनी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका पहिलो अभियान्ता र योद्धा नै भने पनि हुन्छ । जसले जीवनका १५ वर्ष हजारौं मृत शरीरमा छुरा चलाए । कति सम्म भने वीर अस्पतालमा पोष्टमार्टम गरेर निस्कँदा नुहाउने पानी समेत थिएन । त्यही अवस्थामा सार्वजनिक बस चढेर उनी घर फर्कन्थे । गाडीभरीका यात्रुले उनको शरिरबाट आएको गन्धका कारण नाक थुन्थे । उनी बहुत अप्ठेरोसंग घर पुग्थे । तर जब श्रीमतिले घरको ढोका खोलेर आत्मियताका साथ भित्र लैजान्थिन् । उनको गनाएको शरीर सुम्सुम्याउँदै श्रीमती भन्थिन्, ‘हजुर थाकेर आउनु भएको होला, नुहाएर फ्रेस हुनुस् । म खाना पस्कन्छु ।’ बस्तीका सारा कष्ट दूर हुन्थे । मनको अप्ठेरो पखालिन्थ्यो । ‘अहिलेसम्म पनि किन तपाईंले यस्तो काम रोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्न समेत गरेकी छैनन् । मेरो श्रीमानको पेशा यस्तै हो भन्ने भाव उनको आँखामा देख्छु सँधै म,’ प्रा डा. वस्तीले भने ।
कति सम्म भने वीर अस्पतालमा पोष्टमार्टम गरेर निस्कँदा नुहाउने पानी समेत थिएन । त्यही अवस्थामा सार्वजनिक बस चढेर उनी घर फर्कन्थे । गाडीभरीका यात्रुले उनको शरिरबाट आएको गन्धका कारण नाक थुन्थे । उनी बहुत अप्ठेरोसंग घर पुग्थे । तर जब श्रीमतिले घरको ढोका खोलेर आत्मियताका साथ भित्र लैजान्थिन् । उनको गनाएको शरीर सुम्सुम्याउँदै श्रीमती भन्थिन्, ‘हजुर थाकेर आउनु भएको होला, नुहाएर फ्रेस हुनुस् ।
पेशा नै बन्यो पोष्टमार्टम .
२०४८ सालमा लोकसेवा पास गरेपछि गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा पहिलो पटक पोष्टिङ भएका बस्तीलाई तत्कालै वीर अस्पतालमा शव जाँच पोष्टमार्टमको काममा खटाइयो । कुनै कानूनमा व्यवस्था नभएपनि सबै भन्दा जुनियर भएकाले नै करिव ८ वर्ष उनले त्यो काम एक्लै गर्नु प¥यो । पोष्टमार्टम गर्न सकभर सबै पन्छने गर्थे । जुन आजसम्म पनि कायम छ । अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउन वकालत समेत सँगसँगै गरेका बस्तीले भने पोष्टमार्टमको कामलाई सम्मान मात्र गरेनन् । यसको सुधार र आधुनिकीकरणका लागि पटक पटक पहल पनि गरे ।
पछिल्लो २५ वर्षदेखि उनले एउटै किसिमको काम गरिरहेका छन् । मरेका मानिसको शरीर चिर्ने काम । सुन्दा समेत दिक्क लाग्ने काम उनी निरन्तर गरिरहेका छन् । उनलाई फरेन्सिकको क्षेत्रमा केही गर्न पाएकोमा गर्व पनि लागेको छ ।
२५ वर्ष एउटै पदमा
सरकारले २०५६ सालमा तत्काललाई काम चलाउन वीर अस्पतालको भइरहेको फरेन्सिक सेवा बन्द गरी आइओएममा सार्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयसँगै उनलाई पनि कामचलाउको रुपमा आइओएम पठाइएको थियो । सोही निणर्यकै आधारमा उनी पछिल्लो १७ वर्षदेखि अनवरत काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो १७ वर्षदेखि बस्ती कामचलाउ प्राध्यापककै पदमा कार्यरत छन् । पछिल्लो २५ वर्षदेखि मेडिकल अफिसरको पद अर्थात आठौं तहमा उनी कार्यरत छन् । न उनी आईओएमको फ्याकल्टी प्राध्यापक बन्न सके नत उनको बढुवा नै भयो । त्यसो त गत वर्ष चैत्रमा उनी नवौं तहमा बढुवा भए । त्यो बढुवाले उनको क्षमतालाई न्याय गर्न सकेको छैन तर पनि उनी हाँसेरै काम गरिरहेका छन् । भन्छन्, ‘यो क्षेत्रमा केही सुधार गर्नु छ । त्यही भएर निरन्तर काम गरिरहेछु । मलाई पद भन्दा पनि काम र यो क्षेत्रको सुधार ठुलो कुरा हो ।’ वर्तमान वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेतीसँगै उनले लोक सेवा पास गरेका हुन् । ‘यही विषयमा केही सुधार गर्न आएको । अव छोडेर अब कहाँ जानु । जीवनका महत्वपूर्ण समय यसैमा बिते’, उनले भने । मरेपछिको काम भनेर होला कसैले पनि वास्ता गरेनन् । सरकारलाई सुनाउन गयो आइओएमको काम हो भनेर पन्छिने । आइओएमलाई सुनाउन गयो यो मेरो जिम्मामा पर्दैन भन्ने । गुनासो गर्ने ठाउँ कतै भएन । कानूनमा पनि यसैले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कतै व्यवस्था छैन ।
फोरेन्सिक मेडिसिनको शिक्षा विस्तार
काम चलाउ अवस्था भन्दा भन्दै दिइएको जागिरे जीवनमा उनले कहिलै प्रोत्साहन पाएनन् । तर पनि फोरेन्सिक मेडिसिनको शिक्षा विस्तार गरेरै छोडे । उपत्यका मात्र होइन बाहिरका मानिसको समेत पोष्टमार्टम गर्नुपर्ने ठाउँमा जम्मा तीन जना विशेषज्ञ चिकित्सक । त्यसैले ८ वर्षअघि सोही क्याम्पसमा फोरेन्सिक मेडिसिनमा एमडीको पढाइ सुरु भयो । जसका लागि उनले ठूलो योगदान दिएका छन् । ‘व्यक्तिगत जीवनमा मैले केही नपाएपनि शिक्षा विस्तारमा मेरो पनि ठूलो भूमिका छ । त्यही पास गरेकाहरुले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सघाइरहेका छन् ।’ उनलाई पहिले भन्दा सहज भएको पनि छ ।
ओझेलमा परेको फोरिन्सक मेडिसिन
नेपालले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै फड्को मारेको छ । नयाँ सेवा विस्तार भइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा पनि सरकारको चासो बढेको छ । तर फरेन्सिक मेडिसिनलाई कतैबाट पनि सहयोग छैन । मरेपछि सकिहाल्छ नी भन्ने सोचाई र यसमा सुधार गरेर के फाइदा मिल्छ र भन्ने बेवास्ताका कारण यो क्षेत्र निकै ओझेलमा परेको छ । वस्तीको टोलीले दिनरात कराउँदा वा माग गर्दा पनि नत त्यहाँ कहिल्यै भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले जोड दियो नत उनीहरुको सेवासुविधालाई नै प्रोत्साहन गर्यो । शिक्षण अस्पताल मात्र होइन मुलुकभर नै यस्तै बेवास्ता गरिएको छ यो विषयलाई । जबकी फरेन्सिक मेडिसिन पोष्टमार्टममा मात्र सिमित छैन । राज्यल फोरेन्सिक मेडिसिन अध्ययन नगरेका डक्टरहरुलाई नियमबिपरित पोष्टर्माटम तथा अरु मेडिकोलिगल काम जबरजस्ती गरेको वस्तीलाई चित्त बुझेको छैन । उनी भन्छन ‘बरु मलाई केही चाहिन्न । फोरेन्सिक मेडिसिनको अध्ययन र तालिमलाई सरकारले व्यवस्थित गरेर उनीहरु व्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउन भूमिका खेलेको भए म खुसी हुन्थे । मलाई अव एउटै इच्छा छ यो विषय बुझेकोले मात्र काम गरुन । त्यसो भएको भए पीडितले न्याय पाउँथे । अपराधीले सजाय पाउँथ्यो ।’ यता फोरेन्सिक मेडिसेन अध्ययन गरेकाहरुले सम्बन्धित विषयको क्षेत्रमा काम पाएका छैनन् ।
वस्तीको टोलीले दिनरात कराउँदा वा माग गर्दा पनि नत त्यहाँ कहिल्यै भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले जोड दियो नत उनीहरुको सेवासुविधालाई नै प्रोत्साहन गर्यो । शिक्षण अस्पताल मात्र होइन मुलुकभर नै यस्तै बेवास्ता गरिएको छ यो विषयलाई । जबकी फरेन्सिक मेडिसिन पोष्टमार्टममा मात्र सिमित छैन । राज्यल फोरेन्सिक मेडिसिन अध्ययन नगरेका डक्टरहरुलाई नियमबिपरित पोष्टर्माटम तथा अरु मेडिकोलिगल काम जबरजस्ती गरेको वस्तीलाई चित्त बुझेको छैन ।
बस्तीले मेडिको लिगल सोसाइटी अफ नेपाल (MELESON) गठन गरेका छन् । यसमा फरेन्सिक मेडिसिनका विशेषज्ञहरुलाई एकै ठाउँमा राख्न सफल भएका छन् । अबको चार वर्षपछि उनी रिटायर्ड हुनेछन् । तैपनि यो क्षेत्रको सुधारका लागि वकालत गर्ने उनको लक्ष्य छ । ‘पोष्टमार्टम एकपटक गरेपछि दोहो¥याउन मिल्दैन । त्यसैले यसको सत्यतथ्य रुपमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर छोड्र्न पाए हुन्थ्यो ।’ उनले भने
उनी आफु यति कडा र अनुशासित हुनुको श्रेय आफ्नै पेशालाई दिन्छन् । सुरुमा वीरमा उनले महिनामा ४० वटासम्म पोष्टमार्टम गर्थे । अहिले आइओएममा महिनामा एक सय ५० वटा सम्म सबको परीक्षण हुने गरेको छ । त्यस्तै वर्षमा तीन सय जति बलात्कारमा परेकाहरुको जाँच गरिन्छ । कहिलेकाँही पीडकलाई जाँच गर्न ल्याइन्छ । उमेर पत्ता लगाउने पनि त्यस विभागको दैनिक नियमित काम हो भने हिरासतमा यातना पाएका सयौं पीडितहरुको जाँच गरी प्रतिवेदन दिएका छन् वस्तीले । उनी एउटा कुशल प्राध्यापक हुन । सँधै पोष्टमार्टम गरिरहने उनका हात बेला बेलामा काप्ने गरेका छन् । कलिलो बच्चाको पोष्टमार्टम गर्दा पटक पटक उनको मन स्तब्ध भएको छ । मृत बच्चाका निर्दोष आँखाहरुले उनलाई पटक पटक रुवाएको छ । त्यसो त पेशा नै यस्तै छ उनले रोजेको । जति भावुक भएपनि आफ्नो काम यही हो भन्नेमा उनी स्पष्ट छन् । संवेदनशील उनी आफु र आफ्नो काम दुबैप्रति गंभीर छन् । ‘यता मान्छे चिर्छु अर्को कोठामा पुगेर हातसात धोएर भोक लागेको छ भने आधा किलो मासु पनि खाइदिन्छु ।’ बस्ती भन्छन् ।
जीवन प्रतिको दृष्टिकोण
पेशा नै त्यस्तो जहाँ सँधैजसो मृत शरीर खेलाउनुपर्छ । उनलाई लाग्दैन की यो संसारमा कोही धनी र कोही गरिब हुन्छन् । त्यो मानिसले बनाएको दृष्टिकोण मात्र हो । उनका अनुसार जीवन भनेको खुसी हो । अर्थात जीवन रहेसम्म खुसी हुनुपर्छ । चाहे दुःख परोस चाहे सुःख । दुवै पाटा जीवनका लागि महत्वपूर्ण हुन । जीवन रहेसम्म हो इमान्दार हुने र मानवीय बन्ने । मरेपछि सबै बराबर । ‘मैले खरबपतिको पनि लास चिरँे, सडकमा बेवारिसे परेको र शरीरभरी जुम्रैजुम्रा भएकाहरुको पनि शरीर चिरे मलाई उस्तै लाग्यो’ उनले भने । त्यसैले उनी चाहन्छन् मानिसले भोलि खुसी हुने या भोलि इमान्दार हुन्छु भन्ने नसोचोस् । राम्रो काम आजैबाट थालोस् ।
Last modified on 2016-09-26 17:29:22